Ungayithintela njani i-iTunes ekuvulekeni xa sityelele iVenkile ye App ngoSafari | Ndisuka mac
Uyithintela njani i-iTunes ekuvulekeni xa sityelele iVenkile ye-App ngeSafari
Xa sityelela iphepha lewebhu elinxulumene neApple kunye nokusetyenziswa kwayo, kunokwenzeka ukuba ukucofa kwikhonkco lesicelo kuya kuvula ngokuzenzekelayo i-iTunes ukuze sikwazi ukuyikhuphela ngokuthe ngqo, ngaphandle kokuba sikwazi ukubona ukuba inkcazo yesicelo ayiniki ulwazi olwaneleyo olukhuthaza ukuba uluthenge okanye ulukhuphele, ukuba luyafumaneka simahla. Ngokuqinisekileyo, iApple kufuneka inike ukhetho ngokwendalo ngeSafari yokuthintela i-iTunes ekuvulekeni ngokuzenzekelayo, kuba njengomgaqo jikelele kusithatha ixesha elide kunesiqhelo ukuze sikwazi ukukhangela ukuba isicelo silungelelaniswe neemfuno zethu okanye hayi.
Ngethamsanqa, phakathi kwezandiso ezimbalwa iSafari esisinika zona, sifumana i-NoMoreiTunes, ulwandiso oluvimba ukuvulwa kwe-iTunes ukuze ivuleke rhoqo ngalo lonke ixesha sityelela inkcazo yesicelo kwiVenkile ye App. Olu lwandiso ifaka ngokwendalo kwisikhangeli kwaye ayisiniki naliphi na iqhosha loqwalaselo ukuze siyisebenzise okanye singasebenzi, sinokuyishenxisa kuphela ukuba sifuna iyeke ukusebenza.
Ukukhuphela i-NoMoreiTunes, ulwandiso olungafumanekiyo ngokusesikweni ngokusetyenziswa kwe-Safari, kodwa kufuneka sibhenele iphepha elilandelayo lewebhu. Emva koko siya ku Khuphela ingxelo yokugqibela yeNoMoreiTunes yeSafari kunye nohlobo lwamva nje lolu lwandiso lweSafari luya kuqala ukukhuphela. Njengoko benditshilo apha ngasentla, olu lwandiso alusiniki naluphi na uhlobo lokukhetha, singayifaka okanye siyicime. I-NoMoreiTunes iyafumaneka simahla kwaye iphantsi kwelayisensi yeCreative Commons, ke sinokwabelana ngayo ngaphandle kwengxaki nabanye abasebenzisi ngaphandle kokwenza ulwaphulo-mthetho ngokuchasene nobugqwetha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uyithintela njani i-iTunes ekuvulekeni xa sityelele iVenkile ye-App ngeSafari